राज्यमन्त्री बिमलाले खोलिन मुख: यस्तो रैछ वास्तविकता ! - jagritikhabar.com
राज्यमन्त्री बिमलाले खोलिन मुख: यस्तो रैछ वास्तविकता !
दाङको तुलसीपुर ५ बसपार्क स्थित वाइसिएल नेता एकराज बस्नेतको श्रीमती र छोरीमाथि कुटपिट गरेको भन्दै विवादित बनेकी राज्यमन्त्री विमला कुमारी खत्री(वली)ले वास्तविकता भने फरक रहेको बताएकी छिन् ।
उनले नयाँ पत्रिकालाई प्रतिक्रिया दिँदै आफू एकराजसँग भएको पैसाको कारोबार मिलाउन गएको बेला आफूलाई नियोजित तरिकाले फसाउनका लागि यस्तो प्रपन्च गरेको बताएकी छिन् ।
उनका अनुसार वाइसिएल नेता एकराज बस्नेतसँग पैसाको कारोबार थियो । त्यो कारोवार मिलाउनका लागि एकराजसँग एक हप्तादेखि छलफल भइरहेको थियो । फोनमा कुरा भएपनि एक हप्तादेखि सम्पर्कमा नभएपछि विमला घरमै जान बाध्य भइन ।
‘एकराजले मेरो पैसा सापटी लिएको, त्यही पैसाको कारोवारका लागि म घर गएकी थिएँ’,उनले भनिन्‘फोनमा त कुरा भइरहेको थियो, तर, एक हप्तादेखि भेट हुन सकेको थिएन ।’
विमलाका अनुसार एकराजकै घर जानुभन्दा केही समय अघिसम्म पनि फोनमा कुरा भइरहेको थियो । जब उनी घरमा पुगिन त्यसपछि एकराजलाई भेटाउन नसकेको मन्त्री विमलाको भनाई छ ।
‘जब म घरमा पुगेँ, त्यहाँ एकराज नभेटिएपछि, ‘खोइ ! एकराज भनेर सोधेकी हुँ’, विमलाले नयाँ पत्रिकालाई भनिन्‘ भर्खरै फोन भएको,अहिले पनि सम्पर्क हुँदैन भनेर मैले भनेँ ।’ त्यसपछि एकराजको श्रीमतीले जेठाजु बीरेन्द्र बस्नेतलाई बोलाएको विमलाले बताइन्।
जेठाजु बीरेन्द्र बस्नेतसहित घर परिवार र छिमेकी आए । उनीहरु आएपछि भित्रबाट घरको गेटमा चुक्कुल लगाए । चुक्कुल लगाएपछि बीरेन्द्रले आफूलाई गालीगलौज गरेको बताएकी छिन् ।
‘विरेन्द्र आएपछि भित्रबाट चुक्कुल लगाए, त्यसपछि नानाथरी गालीगलौज गरे, अपशब्द बोले, एक पटक विरेन्द्र पिट्न पनि उठेक थिए, त्यतिबेला, पिएसओ र मीनाका ससुरा वुवाले छेकेपछि पिट्नबाट रोकिए’, राज्यमन्त्री वलीले भनिन्‘ त्यतिेबला उल्टै मलाई एक करोड हिनामिना गरेको, सुन चोरेकोसम्मको आरोप पनि लगाए ।’
एकराजकी श्रीमती र आफूबीच तानातान हुँदा आफ्नो पनि चुरा फुटेको बताइन् । उनले आफू सामान्य कुरा गरेर फर्किने तयारी गरेको भएपनि त्यहाँ चुकुल लगाएर मान्छे बोलाएर विवाद चर्काएको विमलाको आरोप छ ।
आफ्नो एकराजसँग मात्रै काम भएकाले त्यही अनुसार त्यहाँ गएको राज्यमन्त्री वलीले बताइन् । एकराजकी श्रीमती मिनाले भने आफू र छोरीलाई कुटपिट गरेको बताएकी छिन् ।
सोही अनुसार उनीहरुले मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । अहिले सदन चलिरहेकाले राज्यमन्त्री वलीलाई बुटवल लगिएको छ । तर, उनी प्रहरी कै निगरानीमा छन् । विमला मन्त्रालयकै गाडी र पिएसओसहित मंगलबार पौने ९ बजेतिर एकराजको घर गएकी थिइन ।
लुम्बिनी प्रदेशकी स्वास्थ्य राज्यमन्त्री विमलाकुमारी खत्री वलीलाई प्रहरीले बुटवल पठाएको छ । दाङको तुलसीपुरमा मंगलबार एकजना महिला र बालिकामाथि हातपात गरेको भन्दै प्रहरी नियन्त्रणमा रहेकी राज्यमन्त्री वलीलाई मंगलबार राति ११ बजे बुटवल पठाइएको हो ।
प्रदेश सरकारको आग्रहमा मन्त्री वलीलाई लुम्बिनी प्रदेशको अस्थायी मुकाम बुटवल पठाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रमुख सुरेश काफ्लेले बताए ।
संसद् चलिरहेको र बहालवाला राज्यमन्त्री भएका कारण बुटवल पठाएको उनले जानकारी दिए । ‘सदन चलिरहेको बहालवाला मन्त्रीलाई यसरी राख्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘राज्यमन्त्री भएकाले धेरै प्रक्रिया पुर्याउनुपर्ने हुन्छ । उहाँलाई हामीले कानुन सम्मत र प्रक्रिया पुर्याएर छोडेका छौं ।’
राज्यमन्त्री वलीले मंगलबार तुलसीपुरका वाईसीएल नेताका एकराज बस्नेतको घरमा गएर उनकी पत्नी र छोरीमाथि कुटपिट गरेको आरोप छ ।
पीडित महिला मिना भण्डारीले भने आफूमाथि राज्यमन्त्री वलीले अभद्र व्यवहार गरेको भन्दै प्रहरीमा जाहेरी दिएकी छन् । प्रहरी प्रमुख सुरेश काफ्लेले उक्त जाहेरीमाथि अनुसन्धान भइरहेको बताए ।
यो पनि हेर्नुहोस, निर्दोष कुकुरलाई काराबास, चोरी सिकारीको आरोप
डिभिजन वन कार्यालय मुगुमा दुई महिनादेखि एउटा कुकुर थुनामा छ । घोरल चोरी सिकारीको आरोपमा मालिकसँगै कुकुरलाई पनि नियन्त्रणमा लिइएको थियो ।
१४ चैत २०७८ मा मुगुको कार्मारोङ गाउँपालिका-१ चितैका च्याम्पा तामाङ, उनका छोरा दावाछोर्देन, टासी र छिमेक तामाङलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । उनीहरूका साथमा कुकुर पनि थियो ।
जंगली जनावर चोरी सिकारीको आरोपमा उनीहरूलाई वन कार्यालयले मुद्दा चलायो । गत जेठ १२ मा जिल्ला अदालतको आदेशबाट च्याम्पा र दावाछोर्देन ७० हजार रुपैयाँ धरौटीमा रिहा भए । टासी र छिमेक साधारण तारेखमा छुटे ।
वन कार्यालयले चलाएको मुद्दामा चार जना मात्र प्रतिवादी थिए । सिकारी कुकुरको प्रतिवादी नभएपछि अदालतले पनि त्यस विषयमा केही बोलेन । अदालतले कुकुरको विषयमा केही नभनेपछि वन कार्यालयले कुकुरलाई थुनेर राखेको छ ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐनको दफा २८ मा ‘सिकारी कुकुरलाई मार्ने’ उल्लेख
कुनै पनि कुकुरले घोरल र मृग जस्ता जनावरको सिकार गर्‍यो भने त्यस्तो कुकुरलाई त नियन्त्रणमा लिइन्छ नै । घोरल सिकार गर्ने क्रममा कुकुर र मानिसलाई समातियो । मानिसको हकमा अदालतले अनुसन्धान गरिरहेको छ भने कुकुरको विषयमा अदालतले केही पनि निर्देशन नदिएकोले थुनामै राखिएको डिभिजन वन अधिकृत गगन महतारा बताउँछन् ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐनको दफा २८ अनुसार ‘सिकारी कुकुरलाई मुद्दा हेर्ने अधिकारीको निर्देशन अनुसार मार्नुपर्ने छ’ भनिएको छ । दफाले त्यो भने पनि मुद्दा हेर्ने अधिकारीले कुकुरलाई छोड्न र मार्ने केही पनि नभनिएको हुनाले त्यसलाई थुनामै राख्नु परेको महताराको भनाइ छ ।
‘अरू पनि जनावरको सिकार गर्न सक्छ त्यसैले मार्नुपर्छ भनेर ऐनले त भन्यो । तर अदालतले कुनै पनि आदेश नदिएको हुनाले त्यस कुकुरलाई डिभिजन वन कार्यालयले राखेको हो,’ उनी भन्छन् ।
‘कुकुरको मालिकलाई कुकुर जिम्मा लगाउँदा फेरि पनि कुकुरसँग मिलेर अन्य वन्यजन्तु सिकार गर्ला । यो सिकारी कुकुर होइन, छोड भनेर अदालतले छोड भन्यो भने हामी छोड्छौं,’ महतारा भन्छन् ।
यो कुकुर सिकारी हो र धेरै कस्तुरी तथा मृग मारिसकेको छ भनेर गाउँलेहरूको पनि बयान आएको छ । पक्राउ परेका अभियुक्तले पनि घोरललाई यो कुकुरले मारेर ल्याएको र आफूहरुले मासु खानको लागि ल्याएको भनेर बयान दिएका छन् । मतराता भन्छन्, ‘घोरलको सिकार गर्ने कुकुरको मालिक पनि धरौटीमा छुटेको हो, मुद्दा त अदालतमा चलिरहेको छ ।’